Chinja ako mavhidhiyo uye maGIF kuva Mapikicha Mapikicha neLive Pro, yemahara kwenguva shoma | IPhone nhau
Chinja mavhidhiyo ako uye maGIF kuva Mapikicha eLive neLive Pro, yemahara kwenguva pfupi
Chimwe chezvinhu zvitsva izvo zvakanyanyisa kubata vashandisi vevatsva iPhone 6s uye 6s Plus mamodheru yaive iyo Rarama Mapikicha sarudzo, iyo sarudzo iyo inotibvumidza isu kugadzira mhando yeGIFs nezwi ratinogona kugovana neshamwari dzedu, mhuri kana shamwari. Zvakanaka shandisa iwo seye Wallpaper yemudziyo wedu, chero bedzi iri iPhone 6s, 6s Plus, 7 kana 7 Plus. MuApp Store tinogona kuwana maapplication mazhinji anotibvumidza isu kuti tishandure Mepikicha Mhenyu kuva maGIF, asi izvo zvinotitendera neimwe nzira, zviripo chaizvo zvishoma. muLive Pro ndomumwe wavo. Ichi chishandiso chine mutengo wenguva dzose we2,99 euros asi kwenguva yakati wandei tinokwanisa kurodhaunura mahara kwenguva pfupi.
Kutenda muLive Pro, isu tichakwanisa kushandura kwete chete edu anodikanwa maGIF, asi zvakare zvinotibvumidza isu kushandura mavhidhiyo edu Ipfupi Mhenyu Mapikicha, Mhenyu Mapikicha atichakwanisa kushandisa semapikicha pane yedu iPhone, kubva kuma6s mamodheru kusvika kuneazvino mamodheru ayo vakomana veCupertino vatangisa pamusika.
IntoLive Pro main maficha
Chinja ako mavhidhiyo mafoto muRarama Mapikicha
Chinja ako aunofarira maGIF kuva Live Mifananidzo
Chinja kuputika kwemifananidzo muPamoyo Mifananidzo
Chinja mifananidzo yako muRarama Mifananidzo
Tinogona kuendesa maGIF mafaera zvakananga kubva pakombuta yedu kuburikidza iTunes.
Iyo inotibvumidza isu kuwedzera mafirita akasiyana kuti tigadzirise mhedzisiro kune zvatinofarira.
Inoenderana nehukuru hwemapepanhau.
Kana iwe uine iyo iPhone 6s / 6s Plus kana yepamusoro, ichi chishandiso chakanakira kana iwe uri mudiwa wekugadzirisa, nekuti iwe unogona kukanganwa nezve zvimiro zvembichana zveupenyu hwese se Wallpaper, chero bedzi usiri kushandisa iyo jailbreak, nekuti kuburikidza nazvo, isu taigona kutoshandisa vhidhiyo kana GIF seye Wallpaper yemuchina wedu, kunyangwe zvine musoro zvabuda zvainge zvisina kufanana neichi chishandiso.
Iko kunyorera hakuchina kuwanikwa muApp Store
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone maapplication » Chinja mavhidhiyo ako uye maGIF kuva Mapikicha eLive neLive Pro, yemahara kwenguva pfupi
App Center, dzinodikanwa dzeControl Center yako
Kushanda paApple Park kunoenderera zvishoma